Shiinaha soosaarayaasha ripper qodista iyo alaabada | MINYAN
Dhamaadka hore ee qalabka wax lagu xardho ayaa laga sameeyay maaddooyin heer sare ah oo duug u adkaysta si loo sameeyo qalab kala-soocid saxan oo wareegsan, kaas oo si fudud u kala sooci kara dhulka iyo dhagaxa isla markaana yareyn kara caabbinta goynta. Waxay jilcin kartaa ciidda adag, dhagaxa la qaboojiyey, dhagaxa jawiga iyo dhagaxda jaban.
Qalabka Ripper1). Xidho bir adkaysi leh ayaa loo isticmaalaa in lagu dheereeyo cimriga dillaaca;2). Dhammaan cabbirka ripper-ka ayaa la heli karaa iyadoo ku xiran moodeelka qodista;3). Adeeg khaas ah ayaa la heli karaa, hal ilig iyo laba ilkood;4). 12 bilood damaanad ah; 5) Biinanka lagu daweeyo.6) .Tignoolajiyada alxanka wanaagsan.Hadafkeenu waa: Tayada marka hore, Adeeggu waa kan ugu muhiimsan, iyo wax soosaarka ugu muhiimsan. Ballan-qaad la'aanta tayada sare leh iyo adeegga fekerka leh waxay naga dhigeysaa sumcad wanaagsan iyo la-hawlgalayaal badan oo imanaya. Waxaananu sii wadi doonaa hagaajinta wax soo saarka si aan ugu adeegno suuqa adduunka. Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno!
Kartida Bixinta:800 Set / Sets bishiiba Baakad & GaarsiinFaahfaahinta Baakadaha Dhoofinta Dacwadaha Alwaaxda ah ama codsashada macaamiisha Faahfaahinta Gaarsiinta: Waxaa lagu raray 3-7 maalmood kadib bixinta qodista ripper culus
Nooca Xirmada:1. baakadda caadiga ah ee dhoofinta badaha, oo ay weel alwaax ama bir ah, kartoon alwaax ah, bir bir ah iwm oo loo yaqaan 'Doosan excavator ripper';2. hal 20GP wuxuu ku shuban karaa qiyaastii 12-14 gogo '1.0m3 ama 1.2m3 baaldiyo oo loogu talagalay riwaayadaha qodista Doosan;3. mid 40HC ah wuxuu ku shuban karaa qiyaastii 26-28 gogo '1.0m3 ama 1.2m3 baaldiyo oo loogu talagalay riwaayadaha qodista Doosan;4. xirmo loo habeeyay doopper qodayaasha Doosan.
DekeddaLianyungang, Shanghai ama QingdaWaqtiga Lead:
Waxaan marwalba u tixgalineynaa tayada wax soo saarka sida nafta shirkadda, waxay ku dhegan tahay mabda'a adeegga, hal-abuurka iyo horumarka waara si ay u noqdaan Nooca ugu sareeya ee warshadaha mashiinada injineernimada. Waxay ku siin doontaa kaalmo farsamo oo heer sare ah, tayada wax soo saarka ugu fiican iyo alaabooyin kala duwan oo kala duwan iyo adeeg dambe oo Xirfad leh.
1. Awoodda Minyan:Waxaan nahay warshad, waxaan leenahay Minyan Dept. u gaar ah si aan ugu suurta galno horumarinta farsamada. Waxaan ugu talagalnay alaab tayo leh tikniyoolajiyadeena.Nidaamka xakamaynta tayada adag:Koox xirfadlayaal ah oo QC ah iyo mashiinno casri ah si loo hubiyo tayada wax soo saarkeennu aad bay u fiican yihiin.3. FalsafadaU fidinta adeegga ugu fiican iyo qiimaha ugu fiican macaamiisheenna waa falsafadeena weligeed ah.Qalabka 4.Rawururinta: Xiriirka iskaashiga muddada-dheer waxaa lala hayaa kuwa u-qalma ee alaab-qeybiyeyaasha ah, kuwaas oo hubiya tayada sare ee annagaalaabooyinka laga bilaabo tallaabada 1aad.5. Taageero mashiin oo sareysa:Taxanaha mashiinada dibedda laga keeno ayaa si ballaaran loo isticmaalaa inta lagu jiro wax soo saarkeenna. Tani waa shuruud lagama maarmaan u ah qalabka warshad soo saartay.Qalabka dayactirka ee joogtada ah: Waxaan soo saareynaa dhammaan baaldiyo qashin qubka, sidaas darteed nidaam sahay qeybaha dayactirka lagu kalsoon yahay ayaa la dejiyay.7. Xulasho kala duwan oo noocyada qodidda qodidda ah:Xirxirayaasha qotoma waxay ka socdaan 0.8ton ilaa 55ton. Jabiyayaasheena waxaa laga dalban karaa dhamaan noocyada kaladuwan ee qodista qashinka.Khibrad dhoofinta:Koox xirfadlayaal ah oo wax iibisa ayaa u ololeyneysa jabiyadeena 50 dal oo adduunka ka badan.
Haddii aad xiisaynayso alaabtayada, fadlan ila soo xiriir.
Waxaan rajeynayaa inaan noqdo lamaanahaaga muddada dheer.
Codsiga qashin qubkaDharbaaxida carrada adag sida cimilada iyo dhagxaanta, tundra iwm.Ku habboon noocyo badan oo nooc ah iyo nooca qodista: KOMATSU, KOBELCO, HITACHI, KATO, SUMITOMO, CAT, HYUNDAI, DAEWOO, CASE, DOOSAN, VOLVO, JCB, JHON DEERE, KUBOTA, LIEBHERR, SANY, iwm.
AdeeggeennaAdeegyada 1.Pre-sale: ah: Naqshadeyn mashruuc u gaar ah macaamiisha.b: Naqshadeynta iyo soosaarida alaabada iyadoo loo eegayo macaamiisha shuruudaha gaarka ah.c: U tababaro shaqaale farsamo macaamiisha.2. Adeegyada inta lagu jiro iibka:ah: Ka caawi macaamiisha inay helaan xamuulyaal xamuul macquul ahdhalmada kahor.b: Ka caawi macaamiisha inay sawiraan qorshayaasha xallinta.3. Adeegyada iibka kadib:a: Caawinta macaamiisha si ay ugu diyaar garoobaan qorshaha dhismaha.b: Ku rakib oo ka bixi qalabka.c: Tababar hawl wadeennada safka hore.d: Baadh qalabkaAdeegga iibka kadib: 24 saac adeegga adeegga farsamada gacanta ayaa la heli karaa;Adeeg gaar ah: sheyga loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha;Dammaanad: 12 bilood oo damaanad ah ka dib helitaanka sheyga.
nooc cusub DH500 Doosan qodaxada ripper lifaaqa iibka1. qoodhiye ripper model nr.: Doosan DH5002. qalabka wax lagu qodayo: Q345B + NM400 ama waa la habeeyay3. miisaanka unugga ripper qodista: qiyaastii 920kg4. Rijabiyeyaasha loo habeeyay waa takhasuskeena5. Suuqyadeena ugu waaweyn waa Ecuador, America, Panama, Russia, Australia, New zeland, Thailand, Singapore iwm 6. nooc cusub oo DH500 Doosan ah oo ku xiraya ripper ku xardhan iib lagu sameeyay Shiinaha
nooca ripper qodaya. Doosan DH500
magaca ripper godka nooc cusub DH500 Doosan qodaxada ripper lifaaqa iibka
wax ripper godka Q345B + NM400 ama la qaabeeyey
midabka ripper godka oranji ama la qaabeeyey
miisaanka unugyada ripper qodista qiyaastii 920kg
ilkaha jeex jeex jeex jeex jeex jeexan qeybta no. D90 (4T5502)
qodista ripper dhinaca ilaaliyaha qaybta no. 9W8365
Cabirka baakada jeex jeexjeexa qiyaastii 2.2m3
xirmo ripper qoda sariirta alwaax
asalka ripper qodista lagu sameeyay Shiinaha
Qashin qubkaJ: Ilkaha culus ee culus Ilkaha la-beddeli karo ee culus oo culus si loo hubiyo natiijooyinka ugu wanaagsan iyo xirashada caabbinta; B: Difaaca sanka Isticmaalka noloshaD: Taakulaynta saxanka Adkaynta qaabdhismeedka oo dhan, ka hortag jirka jiifka kala gooni saxanka dhegta
Minyan baaldi waa wershad khibrad badan u leh samaynta lifaaqa Excavator, waxay leedahay koox injineerkeena ah, kooxda iibka, kooxda wax rarta & xamuulka, iyo shaqaalaha 80 inay bixiyaan 100% feejignaan si loo dhiso 100% alaab tayo wanaagsan leh.
Shirkadeena: XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT CO., LTD
Goobtayada: Gobolka Xuzhou Jiangsu, xarunta ugu weyn ee mashiinnada dhismaha ee Shiinaha.
Alaabtayada: EXCAVATOR ROCK BUCKET, EXCAVATOR EARTHMOVING BUKKET, EXCAVATOR SIEVE BUCKET, BULKET Ilkaha, EXCAVATOR RIPPER, EXCAVATOR QUICK COUPLER, alaabteenu waxay ku habboon yihiin dhammaan noocyada moodeellada qodista. Sida CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI…
Goobta macaamiisheena: Australia, America, Canada, Panama, Brazil, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Russia, Sweden, Norway, Chile, France, Algeria, Angola, South Africa, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Singapore, Philippines iyo wixii la mid ah.
Marnaba ma joojinayno hagaajinta, waxaan dooneynaa inaan noqono kuwa ugu fiican warshadan, inaad ahaato mid lagu kalsoon yahay soo saaraha baaldiga.
Hore: baaldi shaandho baaldi
Xiga: qodista waxay xoojisaa baaldiga dhulgariirka